Home Wararka Ciidamada Kenya oo ka baxaya Soomaaliya waa maxay sababta?
Ciidamada Kenya oo ka baxaya Soomaaliya waa maxay sababta?
Xillibaan ka tirsan Baarlamaaanka Kenya yaa gudbiyay codsi ah in la amro in sida ugu dhaqsiyaha badan Ciidamadda Kenya looga saaro Soomaaliya oo ay Al-shabaab kula dagaalamaan.
Xillibaanka Codsigaan u gudbiyay Baarlamaanka Kenya waxaa soo qaatay khasaaraha Kenya kasoo gaaray Weerarkii 2013 kii Al-shabaab ay ku qaadeen Suuqii Westigate oo ay ku dhinteen 67 ruux iyo Weerarkii Jaamacadda Garisa oo 149 ruux ay ku dhinteen.
Tan iyo 2012 kii Ciidamadda Booliiska Kenya waxay diiwaan galiyeen 155 Weerar oo Al-shabaab ay Dalkaas ka geeysteen.
Previous articleMucaaradka oo markaan usoo jeestay sidii ay Kursiga ugu tuuri lahaayeen Dowladda Fashilantay ee Nabar&Naxdin
Next articleShil ay ku Wax yeelobeen caruur oo kadhacay Degmada Waabari
AQRISO: Qaramada Midoobay oo Shegtay Xalad Nolo Xumo In Ay Ka...
Madaxweynaha Puntland oo Magacaabis Cusub sameeyay (Aqriso)